कसरी व्रत बस्ने ? - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
कसरी व्रत बस्ने ?
पूर्व बैंकर्स तथा योग शिक्षक
 व्रतको विज्ञान भनेको सन्तुलित भोजन ग्रहण गर्नु र शरीरलाई स्वस्थ राख्नु हो । धेरैजसो महिला तीजमा फलफूल खाएर, पानी, सर्वत वा जुस पिएर वा केही पनि नखाई निराहार बस्छन् ।
 व्रत बस्दा दैनिक चल्ने पाचन प्रणालीले विश्राम पाउँछ र पाचन क्रिया सही रूपले संचालन
हुन थाल्छ ।
 रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ ।
 शरीरको आन्तरिक प्रणालीलाई निर्मलीकरण गरेर भित्री अंगहरूलाई स्वस्थ राख्छ ।
 रगत शुद्धीकरण हुन्छ ।
 शरीरको सबै भागमा ऊर्जा संचार हुन्छ ।
 व्रत बस्दा योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान गर्नु प्रभावकारी हुन्छ ।
 योगासनले पसिनाको माध्यमबाट शरीरभित्रको विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निष्कासन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
 व्रतका समयमा सूक्ष्म व्यायामजस्तै मार्जरी आसन, परिवृत्त आसन, भरद्वाज आसन गर्दा ढाड, कम्मर, पेट तथा खुट्टा दिनभरि सहज रहन्छ ।
 प्राणायामले मनलार्ई शान्त राख्न तथा मनोशक्ति बढाउन मद्दत गर्छ, तसर्थ ३ देखि ५ मिनेटसम्म शीतली प्राणायाम गर्नु प्रभावकारी हुन्छ ।
 त्यसैगरी व्रतको समयमा शरीरलाई ऊर्जावान् राख्न, मनलाई शान्त गराउन एवं चेतनालाई सक्रिय राख्न ध्यान गर्नुपर्छ । ध्यानले शरीरमा भएको सूक्ष्म ऊर्जालाई सक्रिय तुल्याउँछ । ध्यान गर्दा सामान्य अवस्थामा बसेर भित्र आएको श्वास र बाहिर गएको श्वासलाई लामो अनि गहिरो बनाउँदै १० देखि २० मिनेटसम्म बस्नुपर्छ ।
 निराहार व्रत बस्नुभन्दा समय–समयमा पानी पिइरहनुपर्छ ।
 वर्षको एकपटक मात्र व्रत बस्नुभन्दा पनि साताको एकदिन पेट खाली राख्नु उत्तम हुन्छ ।
 व्रतपछि पानी अथवा ताजा फलको रस पिउनुपर्छ ।
 व्रतको भोलिपल्ट भुटेको, तारेको, चिल्लो तथा गरिष्ठ खानेकुरा खानु हुँदैन । यसले खाली भएको पेट तथा आन्द्रामा घाउ बनाउन सक्छ ।
 जाउलो, खीरजस्ता हल्का भोजन खानुपर्छ ।
 प्रोटिनयुक्त खानेकुरा तथा गेडागुडीको रस पिउनु उपयुक्त हुन्छ ।